Reseller Web Hosting | Shwe Web Hosting | Myanmar
သင်လဲ Web Hosting စီးပွားရေးတစ်ခုကို Shwe ရဲ့ Reseller Plan နဲ့ စလုပ်လို့ရပါတယ်။
IT company, web design company, freelance web developer များ Web Hosting စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Shwe ရဲ့ Reseller Plan နဲ့ စလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကအလွယ်ကူဆုံး ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ Shwe က cPanel WHM (Web Host Manager) ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေနဲ့ cPanel account ပါဝင်သော hosting များကို သင့် client/customer များသို့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုရောင်းချရာမှာ သင့်အနေနှင့် ကိုယ်ပိုင် package များ၊ hosting feature များ၊ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Shwe မှသင့်ကို Private Nameserver ပြုလုပ်ပေးမည့်အပြင် သင့် customer များရဲ့ cPanel Template ကိုလည်း သင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်နာမည် (Own Brand) ဖြင့်ရောင်းချနိုင်မှာပါ။
(10,240 MB) 20 GB
(20,480 MB) 50 GB
(102,400 MB) 200 GB
(204,800 MB) 500 GB
Web Host Manager - WHM (for you) Yes Yes Yes
Hosting cPanel accounts (for your customers) 10 20 40
Domains allowed 15 30 50
24x7 Server Monitoring Yes Yes Yes
Weekly Backup (for Main Reseller Account) Yes Yes Yes
Weekly Backup (for your Customer Accounts) Available on Additional Purchase
Intel Xeon (4 CPUs high performance servers) Yes Yes Yes
99% Uptime Guarantee Yes Yes Yes
Backbone connection & network monitoring Yes Yes Yes
Reseller Admin Panel (WHM) Features
Latest WHM Control Panel Yes Yes Yes
Fully Account Management (Create, Suspend, Terminate, Upgrade/Downgrade, etc...) Yes Yes Yes
Complete Control (packages, specify disk space, bandwidth, email, databases, etc...) Yes Yes Yes
DNS Management (Add/Edit/Delete DNS Zone for all hosts) Yes Yes Yes
Brandable Client Panel with your company logo Yes Yes Yes
WHM Demo account:
Control Panel (cPanel 11) Features
Email Account Management Yes Yes Yes
MySQL Database Management Yes Yes Yes
Domain Management Yes Yes Yes
FTP Account Management Yes Yes Yes
Script Library Yes Yes Yes
Instant Blogs (1 click install for b2evolution, Nucleus, WordPress) Yes Yes Yes
Instant Portals (1 click install for Drupal, WordPress, Geeklog, Joomla, Mambo, etc...) Yes Yes Yes
Instant Forums (1 click install for phpBB, SMF) Yes Yes Yes
Instant Image Galleries (1 click install for 4Images, Coppermine) Yes Yes Yes
Instant Site Builders (1 click install for Soholaunch Pro, Templates Express) Yes Yes Yes
Instant Guestbook / Wiki / Polls / Counter / FormMail and other scripts Yes Yes Yes
cPanel Demo account:
CGI/Perl Yes Yes Yes
Cron Job Scheduling Yes Yes Yes
Email - POP3 Yes Yes Yes
IMAP / POP / SMTP Access Yes Yes Yes
Spam Filtering - SpamAssassin Yes Yes Yes
Technical Support Fee FREE FREE FREE
Annual Fee / နှစ်စဉ်ကြေး 195,000 Ks 385,000 Ks 755,000 Ks
မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်ရက်လျှင် ၄၅ဝကျပ်
(လဖ္ဘက်ရည် တစ်ခွက်စာမျှ) ဖြင့်
Web Hosting စီးပွားရေးတစ်ခုကို
Shwe ရဲ့ Reseller Plan နဲ့ စလုပ်လို့ရပါတယ်။
Shwe Hosting မှ ရောင်းချသည့် Reseller hosting ၏ အားသာချက်များ
cPanel WHM (Web Host Manager) တွင် သင့် customer/hosting များအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှထိန်းချုပ်နိင်ခြင်း
သင်ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်မည့် hosting account များကို ကန့်သတ်မှုလုံးဝမရှိခြင်း (Unlimited cPanel account)
Hosting Feature (Domain, E-mail, FTP, etc...) များကို ကန့်သတ်မှုလုံးဝမရှိခြင်း
Private Nameserver ဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခြင်း
သင့်လုပ်ငန်းနာမည် / သင့်ကိုယ်ပိုင်နာမည် (Own Brand) ဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခြင်း
သင်ကိုယ်ပိုင် သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ရောင်းချနိုင်ခြင်း
This is an easy, inexpensive and profitable why to start your very own web hosting company! Our cPanel and WHM software package makes life easier for your web hosting business and your customers - web masters/developers, website owners you serve. Our reseller hosting plan will allow you to create unlimited web hosting under your own brand name, with your own pricing, packages and features.
Reseller Hosting ဆိုတာဘာလဲ
IT Expert, Web Master, Web Designer/Developer တွေအတွက် Web Hosting စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Shwe ရဲ့ Reseller Plan နဲ့ စလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကအလွယ်ကူဆုံး ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သင့်မှာ Datacenter, Server Hardware တွေ Software license တွေရှိစရာမလိုပါဘူး။ Shwe က Reseller web space, bandwidth နဲ့ cPanel Web Host Manager (WHM) ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် သင့်အနေနဲ့ cPanel account ပါဝင်သော hosting များကိုသင့် customer များသို့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရောင်းချရာမှာ Shwe မှသင့်ကို Private Nameserver ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်နာမည် (Own Brand) ဖြင့် သင့် customer ကိုရောင်းချနိုင်မှာပါ။ ထို့အပြင် သင့် customer များရဲ့ cPanel Template ကိုလည်း သင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ customer အမြင်တွင်သင်သည် Datacentre တွင် Hardware, Software license ဖြင့် US$ သောင်းပေါင်းများစွာရင်းနှီးထားသည့် hosting စီးပွားရေးလုပ်နေသည်ဟုသာ ထင်နိုင်ပါသည်။ Shwe ရဲ့ Reseller Plan က cPanel account များကို ပေါပေါသီသီ ပေးထားသည့်အပြင် Domain, E-mail, FTP အစရှိသော အရေးပါသည့် feature များကိုလည်း unlimited ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေနှင့်ကိုယ်ပိုင် package နှင့် သင့် customer များအတွက် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reseller Hosting မှာ အမြတ်အစွန်းဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
အပေါ်က FAQ ဖြစ်တဲ့ Reseller Hosting ဆိုတာနည်းလည်သွားပြီဆိုရင် အမြတ်အစွန်းဆိုတာ သင့်လက်ထဲမှာဆိုတာ နားလည်မှာပါ။
ဥပမာ - Resell - 1 plan (10 GB) ကို တစ်နှစ်လျှင် 1 သိန်း9သောင်း ဝယ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ သင်က 1 GB space ကို package လုပ်ပြီး သင့် customer ကို တစ်နှစ်လျှင်3သောင်းနဲ့ account 10 ခုရောင်းရင်3သိန်း ရပါမယ်။ တစ်နှစ်လျှင်5သောင်းနဲ့ ရောင်းရင်5သိန်း ရပါမယ်။ ဒါက ဥပမာပါ သင့်တွင်စီးပွားရေးအမြင်ရှိလျှင် ရှိသလောက် 100 MB, 200 MB, 500 MB package များလုပ်ပြီး သင့်လျော်ရာဈေးနှုန်းဖြင့် အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
နောက် ဥပမာတစ်ခု - လက်ရှိလောက IT မဟုတ်ဘဲ ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်။ ရက်ကွက်ဈေးထဲကပိတ်စရောင်းတဲ့သူက သူကိုယ်တိုင်ပိတ်စစက်ရုံမပိုင်ပါဘူး။ သူက ပိတ်စဒိုင်တွေဆီမှာ ပိတ်စကိုက်အများကြီးပါတဲ့ ပိတ်အုပ်တွေသွားဝယ်ပါတယ်။ ပြီးရင်သူကရပ်ကွက်ဈေးထဲမှာ 1 ကိုက်ကို 1000 ကျပ် စသည်ဖြင့်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး ပြန်ရောင်းတာပေါ့။ ဝယ်တဲ့သူအပေါ်မှာမူတည်ပြီး5ကိုက် 10 ကိုက် သူကြိုက်သလောက်ဖြတ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမှာပေါ့။ ဈေးချိုချိုနဲ့ များများရောင်းမလား၊ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ (အလုပ်မရှုပ်အောင်) နဲနဲပဲရောင်းမလားဆိုတာတော့ သူ့မှာ idea ရှိမှာပါ။
Shwe Hosting တွင် Credit / Debit card / PayPal နှင့်ဝယ်လျှင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
Customer Address သည် Card ၏ Billing Address ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Card ၏ Billing Address ဆိုသည်မှာ Card holder (Card ပိုင်ဆိုင်သူ) ၏ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် Card အသုံးမပြုနိုင်၍ သူများ Card အား အသုံးပြုခွင့်ရ၍ အသုံးပြုခြင်း (သို့) Company Card များသုံးပါက First name နှင့် Last name သည် Card Holder ၏ First name နှင့် Last name ဖြစ်သည်။
Post Code/Zip Code ရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်ပါက ဖြည့်စွက်ပါ။ မရှိပါက '-' အတိုင်းသာထားပါ။
First name, Last name များ၊ လိပ်စာများ မှားယွင်း ဖြည့်စွက်ပါက Credit/Debit Card details များ မှန်ကန်သော်လည်း Transaction Failure ဖြစ်ပါမည်။